पाँच थुनुवासहित देशभरि १३३ कोरोना सङ्क्रमित थपिए « Mechipost.com
पाँच थुनुवासहित देशभरि १३३ कोरोना सङ्क्रमित थपिए
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:१६
फिदिम । नेपालमा थप १३३ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको र एक व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको छ । यससँगै शुक्रवार अपराह्णसम्म देशभरि पुष्टि भएका सङ्क्रमितको कुल संख्या १८,३७४ पुगेको छ ।
अहिलेसम्म ४४ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९ पुष्टि भएका मानिसमध्ये अहिलेसम्म १२,९४७ रोगमुक्त भएका छन् । अधिकांश सङ्क्रमितमा रोगको लक्षण नै नदेखिएको तर पीसीआर परीक्षणमा कोरोनाभाइरस पाइएको सरकारको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार अहिले सङ्क्रमण भएका कुल ५,३८३ व्यक्ति देशभरि आइसोलेशनमा छन् । केही स्थानमा सङ्क्रमितहरूलाई घरमै अलग्ग बस्ने अनुमति पनि दिइएको छ । गत असार १९ गते सर्वाधिक ७४० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको संख्या घटिरहेको छ ।
मन्त्रालयले मङ्गलवार १५०, बुधवार १०० र बिहीवार १४७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको विवरण दिएको थियो । केही सातादेखि भारतबाट घर फर्किने मानिसको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको बताइन्छ । त्यसो हुँदा क्वारन्टीनमा चाप घटेको र परीक्षणको सङ्ख्या कम हुँदा सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम पनि घटेको सरकारको भनाइ छ ।
शुक्रवार बिहान मृत्यु भएकी व्यक्ति पर्साकी ८५ वर्षीया महिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुटुको समस्याबाट पीडित ती वृद्धामा स्वास्थ्यसम्बन्धी अरू समस्या देखिएपछि केही दिनअघि स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
उपचारका क्रममा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको र नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा उनमा कोभिड–१९ पुष्टि भएको गण्डकस्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालका डा. उदय नारायण सिंहले बताएका छन् । उनलाई बुधवार आइसोलेशनमा राख्न उक्त अस्पतालमा सारिएको थियो। उनमा निमोनिया पनि देखिएको थियो ।
अहिले पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू विभिन्न जिल्ला हुन् । तीमध्ये पर्सा जिल्लामा ३२ जना छन् । वीरगन्जस्थित बीबीसी संवाददाता माधुरी महतोका अनुसार नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमध्ये प्रहरी हिरासतमा रहेका पाँच थुनुवा पनि छन् ।
थुनुवामा सङ्क्रमण देखिएपछि वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर सील गरिएको छ । यसअघि बुधवार एक वृद्धमा मरणोपरान्त र दुई चिकित्सकसहित १७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । जिल्लामा सङ्क्रमित थपिने क्रम नरोकिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिवार बिहान ५ बजेदेखि पर्सामा अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ३,९८७ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा १०७ जना कोरोनाभाइरसमुक्त प्रमाणित भएका छन् । अहिले देशभरिका क्वारन्टीनमा १९,४४४ जना छन् । नेपालमा पुष्टि भएका अधिकांश सङ्क्रमितहरू भारतबाट आई क्वारन्टीनमा बसेका वा तिनको संसर्गमा आएका व्यक्ति हुन् ।
तीमध्ये पनि २०–४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सर्वाधिक भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्क्रमितको कुल संख्या ४,००० नाघेको छ ।